तनहुँकि ९ महिना बालिकालाई के आइलाग्यो यस्तो ? उपचार खर्च २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ! – My Blog
No Comments on तनहुँकि ९ महिना बालिकालाई के आइलाग्यो यस्तो ? उपचार खर्च २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी !
← डाक्टरले नै अब धेरै बाच्दैनन् भनेपछि बिरामीले ‘अब म बाँचेर काम छैन घाट लैजान’ भन्न थालेपछी……. → ८ दिन अघिदेखि हराएकी १६ वर्षीया क्रिष्टिला जंगलमा मृताआस्थामा फेला परिन